IPAKO Ngonaphakade yinto eqhelekileyo kunye nokuleqwa ngamapolisa alishumi | I-Androidsis
IPAKO yisaga yamapolisa asukela imidlalo eye yaba nemidlalo emibini yokuqala esonwabela ngayo. Ngoku iMithi yaMadoda yeMidlalo ikhuphe isahlulo sesithathu apho yonke into yesaga icinezelwe kumdlalo oqhelekileyo.
Oko kukuthi, sinokuyonwabela imidlalo ekhawulezayo thina bangena kanye kuleqa ezenze ukuba le saga yemidlalo ehambayo idume. I-PAKO Ngonaphakade izisa isitayile esibonakalayo kunye nayo ngemibala ethe tyaba kunye nefuthe lesandi kunye nemizobo yokuziva amapolisa phantse aphefumla ngasemva kwakho.
1 Amapolisa aleqa njengawo nawuphi na umdlalo
2 Isaga yePAKO igxile kwinto enye
3 Iimoto ezili-19 zokuvula
Amapolisa aleqa njengawo nawuphi na umdlalo
Besisele sazi ukuba iMidlalo yaMadoda aMthi iyayazi indlela yokwenza izinto kakuhle ngePAKO yakhe yokuqala, kwaye umzuzwana owalandela umkhondo womgangatho oshiyekileyo eyokuqala ukuzisa enye efanayo, kodwa nomxholo ongaphezulu. KwiPAKO Ngonaphakade bebefuna Zisa konke okuqhelekileyo oko kusibeka ngokupheleleyo kwisiseko se-saga: amapolisa asukela.
Kwaye wenza kakuhle kakhulu, kuba kwimizuzwana nje siya kuba namapolisa ukunyathela ngeenyawo zethu, Ukuze sikwazi ukwenza ujiko olugqithisileyo kwaye ngenxa yoko zirram phakathi kweemoto ezininzi kwaye sinokuphefumla imizuzwana embalwa ngaphezulu.
Ukuqhola umdlalo wokulutha wePAKO Ngonaphakade, kwisiqingatha somzuzu unokufumana izakhono ezongezelelweyo njenge-drone ephosa umbane Ukuphelisa amapolisa okanye ibhola yelitye ebotshelelwe kwifender yemoto ukuze ngenxa yesantya semoto yethu, itshabalalise nasiphi na isithuthi esinobuganga bokudlula.
Isaga yePAKO igxile kwinto enye
Umdlalo oqhelekileyo apho asiyi kuba nalo olo phononongo kweePAKO ezimbini zokuqala, ezinendawo ezintle, kodwa lonke uxinzelelo noxinzelelo lokuleqwa ngamapolisa apho singayi kuba nomzuzwana wokusela ikiti.
Imidlalo yamadoda omthi ikwazile ukuba nayo yonke into oyifunayo ukugxila kwimidlalo kwaye ungalibali nokuba kufuneka uvule umxholo ongaphezulu fumana iimoto ezintsha. Yonke into eku-PAKO Ngonaphakade isekwe ekudlaleni imidlalo eyoyikisayo enye emva kwenye, ihlala izama ukufumana elona nani liphezulu lemizuzwana ukuya phambili kwiibhodi eziphambili zehlabathi.
Elinye lamaxabiso ongezelelweyo ngu ukuveliswa okungahleliwe kweemephu ngalo lonke ixesha sidlala umdlalo; Hi ndlela leyi, kuya kuba kukugqiba enye kwaye ishumi lomzuzwana siza kube siqala enye. Ngendlela, vula iselfowuni yakho ukuba idlale kwimowudi yokuma komhlaba ukonwabela ezo meko ngelixa uphepha ezo moto zamapolisa ziphambeneyo.
Iimoto ezili-19 zokuvula
I-PAKO Ngonaphakade ikuthatha ekuleqiseni amapolisa apho unokuvula khona ubuchule obukhethekileyo bujika loo mizuzu kwezinye ezihlekisayo. Umdlalo ochitha ulonwabo kwaye usivumela ukuba sigxile ekudlaleni umdlalo omnye emva kwelinye ukuze sisebenzise elona xesha sikhululekileyo sinalo.
Ulawulo lukwanomdla kakhulu kwisakhono sokukhukulisela kwisiphumo esikhulu ngokubamba zombini amaqhosha asekhohlo nasekunene ngaxeshanye. Kuya kuba yinto ukuhamba ukufumana ukuxhoma kwayo ukuze ukwazi ukusebenzisa loo ndlela kwaye uphume kula maxesha apho iimoto ezininzi zisilandela khona.
Ngokobuchwephesha yenziwa kakuhle kakhulu kwaye izisa nayo yonke into eyenze le saga yamapolisa ileqe kakuhle. Ukuqaqambisa imeko-bume, uqhushumbo, iziphumo zefiziksi, kunye noyilo lwesithuthi ukufezekisa iseti yeshumi, ekhangeleka ifanelekileyo kwisixhobo esisebenza ngokusezingeni eliphezulu kwiscreen.
IPAKO Ngonaphakade ize phantse ibe yeyona ibalaseleyo kwezi zintathu Saga kwaye oko kuyakukugcina usebenza kakhulu phambi kwescreen sakho esiphathwayo ukonwabela okomntwana onezo sireni, onke loo mapolisa akuleqa kunye nalawo aqhushumbo oya kuthi uwabangele ngamaxesha onke. Ukuqwalaselwa kwengxilimbela kunye nendlela yokuphelisa iimoto ngaphandle kwemvumelwano okanye isizathu.
Ayinasiphelo kumgangatho wobugcisa
IPAKO yonke into egxile kuyo
Ukuchaneka ukuya kwinqanaba: masidlale
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » I-PAKO Ngonaphakade ikulethela eyona nto intle yesaga enkonkxiweyo